မတရားတာတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » မတရားတာတွေ
super custom တွေကို ဒဏ်ရိုက်မယ့် အစီအစဉ် ထွက်လာပြီ လို့ ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖတ်ရတယ်
ပြည်တွင်းကို ခိုးသွင်းခွင့် ရှိသူတွေက နယ်စပ်နဲ့ ပေါင်း .. လမ်းကြောင်းနဲ့ ပေါင်းပြီး ခိုးသွင်းတယ် .. အသားတင် ရိတ်သွားတယ်
အခု ၀ယ်ထားတဲ့လူတွေ end user တွေက သူတို့တွေ မဆောင်ခဲ့တာကို စုပေါင်းပြီး ဆောင်ရမယ် ဆိုတော့
ယိုသမျှ ချေး ပုစွန်ခေါင်းမှာ စုတယ် လို့များ ဖြစ်နေသလားလို့ တွေးမိတယ်
နောက်ပြီး ဆောင်ရမှာက ဒေါ်လာနဲ့ တဲ့ .. ဗမာငွေလေး ရှိလို့ ၀ယ်စီးမိပါတယ် .. အခုလို ဒေါ်လာနဲ့မှ ဆိုတော့ ဘယ်လို ဆောင်ရမှာလဲ (၀ယ်ရတော့မှာပေါ့)
၀ယ်ပြီး ဆောင်မယ် ဆိုပါတော့ .. ဘယ်လို ရထားတဲ့ ငွေလဲ လို့ မေးရင် ဘယ်လို ဖြေရမှာလဲ .
နောက်ပြီး ဒေါ်လာ မဟုတ်ပဲ (ပြန်သိမ်းမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့) FEC ပဲ ဆောင်ရမယ် ဆိုရင် ကော
နောက်ပြီး ဒီလို လုပ်လိုက်တာက ဒေါ်လာ FEC တွေ ဈေးကျနေတာကို ဆွဲတင်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းများ လွဲနေသလား ..
ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုတော့ ရှိနေမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဒုက္ခ ရောက်ကြရပီလေ ၊
စိတ်မကောင်းစရာသတင်းပါပဲ၊ သေချာတာတော့ ဒေါ်လာဈေးတွေ ပြန်တက်လာတော့မှာ ။
ရဘူးလေ ။အကောင့်ထဲ ကို ဒေါ်လာနဲ့ထဲ့ပေးရမှာတဲ့…….ဟူး..မနဲပါလား…စီးရတာနဲ့ မတန်ဘူး…
အကောင့်က ကိုယ့်အကောင့်ဖြစ်နေရင် တပြည်လုံးက ပိုက်ဆံတွေ …ထောပြီ။အကောင့် ပိုင်ရှင် ဘသူလဲ?
ဘယ်သူ့ အကောင့်ပါလိမ့်နော်။အဲလိုတကယ်လားဟင်။သေချာပါပီ. ဒေါ်လာတွေ ဈေးတက်အောင်အတမင်သက်သက် ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင်တာ။ဒီကောင်တွေမို့ လို့ ဒီအတွေးမျိုးတွေးရက်တယ်။ခေါင်းမရှိဘဲလျှောက်ရမ်းနေပီ။သာမန်လူတွေတော့နာပီဘဲ။
အကောင့်တခုရဲ့ ပိုင်ရှင် ဘသူဆိုတာ ဘဏ်မှာစုံစမ်းလို့မရဘူးထင်တယ်နော….။
မနေ့က ရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတာတော့ ထုတ်လုပ်သူက ပေးရမယ်လို့ ရေးထားတယ်
သတင်းက အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာ ဆိုတော့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးဦးက confirm လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်
FECဈေး ဒေါ်လာဈေး တစ်နေ့ငါးကျပ်ကနေ တစ်ဆယ်လောက်ထိတက်နေပြီ
ဇုန်ပိုင်ရှင် ဆောင်၇မှာပါ ။ ၀ယ်ကတည်းက တော်တော်များများ စာချုပ်မှာ အမည်ပေါက် အခွန်ဆောင်ပြီး နံပါတ်ထွက် တဲ့ထိ ဇုန်ပိုင်ရှင်ကလုပ်ပေးရမှာ။
ကြားထဲက အမြတ်ထုတ်သွားတာ ဘယ်သူတွေလဲ၊
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကဖတ်လိုက်၇တဲ့ သတင်းထဲမှာ ကွန်တိန်နာအလုံး(၂၀)ထဲမှာ တစ်စဆီဖြုတ်ပီးတင်သွင်းလာတာ ကားအစီးရေ ၂၀၀ကျော်လို့ဆိုပဲ…အဲဒီမှောင်ခိုတင်သွင်းတဲ့ ဇုန်ကားတွေထဲမှာ နာမည်ကြီးဇုံပိုင်ရှင်တွေလည်းပါတယ်၊
အကောင်ဆုံးကတော့ ဇုံပိုင်ရှင်နဲ့လက်ရှိပိုင်ရှင်တွေကို ညှိနှိုင်းပေးဆောင်စေမယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေမှာပါ။
စကတည်းက ၀ယ်မစီးနဲ့ပေါ့…။ ကိုယ်တွေ့တော့ မဟုတ်ဘူး…။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဖြစ်သွားတာလေးပြန်ပြောလို့ရမလားမသိဘူး..။ အရင်တစ်ခါ လိုင်စင်မဲ့ တွေ ပထမအကြိမ် ဖမ်းတုန်းကရယ်စရာလေးပါ..။ လိုင်စင်မဲ့ ကားတွေ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံး ရဲစခန်းရှေ့ လာထိုးရမယ်ဆိုတော့ တောင်းအေ့စ်လား ဟိုင်းအေ့လားမသိပါဘူး..။ ၀ယ်ထားမိတဲ့သဌေးက သူ့ကားကို နိမ္ဗာန်ယာဉ်လုပ်ပြီး ထားပြီးသား ..။ အဲဒိကားကြီးက အမိန့်ထုတ်ထုတ်ချင်း နောက်ဆုံးနေ့ကို တောင်မစောင့်ပဲ ချက်ချင်း ရှေ့ဆုံးက နေ တန်းစီးပါလေရော…။ ဟာ…… မြို့သူမြို့သားတွေက သဘောကျတာပေါ့…။ နိမ္ဗာန်ယာဉ်ကြီး စခန်းရှေ့ ရပ်ထားတာကို…။ ဟိုက်လက်မခံရဲဘူး…။ ကြောက်ချီးတွေတောင်ပါဆိုပဲ..။ ဒါကြီးတော့ လာမရပ်ထားပါနဲ့ လိုမှခေါ်ပါ့မယ်ပေါ့ …။ ပြန်လွှတ်လိုက်ရတယ်…။ သဘောပါကြလားတော့ မသိဘူး…။ သတိရလို့ ပြန်ပြောပြတာ..။
ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆောင်ခိုင်းတာပါဗျာ….. လူလည် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် အမည်ခံ သူခိုးကြီးများက ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေကြခြင်းပါ။ ပြသနာအရင်းအဖြစ်ကိုရှင်းချင်ရင် ဘယ်ဇုန်.. ဘယ်ထုတ်လုပ်ရေးက ဘယ်နှစင်း ထုတ်လုပ်ပြီးကြောင်း ကညန မှာ ယာဉ်စစ် စာရင်း၇ှိပါတယ်။ ငယ်စာရင်းလှန်ပြီး .. လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ချင်းခေါ်ပြီး ဆောင်ခိုင်းသင့်ပါတယ်။ ၀ယ်သူကိုဆောင်ခိုင်းရင် သယ်သူက လိမ်လည်မှု့နဲ့ ပြန်တရားစွဲနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံတော်က တိုးတက်စေချင်လို့ အားပေးခဲ့တာကို အခွင့်ကောင်းယူခဲ့တဲ့ သူတွေကို မှတ်လောက်အောင် ဆုံးမမှ ရပါမယ်။ အခုသွားချင်နေတဲ့ စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ကို undermind လုပ်ခဲ့သူ အားလုံး ( သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများပါ အပါအ၀င် ) ကို လိုအပ်သလို စိစစ်.. စစ်ဆေး ပြီး အမှန်အတိုင်း ပြည်သူကိုတင်ပြသင့်ပါတယ်။
တဘက်ကလဲ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ သွားလာရေးလုံခြုံဖို့၊ အဆင်ပြေစေဖို့၊ သက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့အတွက် ကားတင်သွင်းခွင့်ကို ချိန်ဆပြီး ပြန်ခွင့်ပြုသင့်နေပါပြီ။ အခွင့်ထူးခံတွေမှရတဲ့ အခွင့်အရေးကို သာမန်ပြည်သူတွေခံစားနိုင်မှ နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမှာပါ။
တင်သွင်းတဲ့နေရာမှာလဲ တရားဝင်ဖြစ်သွားရင် ရမယ့်အခွန်သည် နိုင်ငံတော်ထံ လုံးလုံးရောက်မှာမိုလို့ လိုနေတဲ့ budget ကိုလျှော့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ငတက်ပြားကြီးများဆီရောက်ပြီး ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးထမ်းနေရတာထက်စာရင် နိုင်ငံအတွက်တရားဝင်ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးသင့်နေပါပြီ။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ပေါ်လစီသစ်အောက်မှာ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း အပေးအယူ အလျှော့အတင်း လုပ်နိုင်ကြပါတယ်တဲ့..။
ဒါကိုအ၇င်းခံရှာ၇၇င် ဒီကားတွေဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းက လာတ်စားပြီး Passလုပ်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းက
လူတွေကိုဆောင်ခိုင်းသင့်တာပါ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီးမဆောင်ဘဲနေ၇င် သူပိုင်ပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီး
အဲ တ၀က်လောက်ကတော့ ဇုံကားထုတ်ဖို့ လိုင်စင်လျောက် တဲ့ လူလည်ကဆောင်သင့် ပါတယ်
Custom ကလဲ ကိုသာဆိုးတွေဘဲ ဖြစ်လာတာပါလားနော်
ကျွန်တော်တင်ဘူးတဲ့ ကောင်းကြသေး၇ဲ့ လားအ၇ပ်ကတို့ မှာသူတို့ တစ်တွေ၇ဲ့ တစ်နေ့ လာတ်၇ငွေ
အနည်းဆုံးကိုေ၇းတင်ထာပါတယ် ဒါဟာအမှန်တွေပါ
ထုတ်လုပ်သူကပေးရမယ်တော့ပြောတယ်။ထုတ်လုပ်သူပမပေးဘူးဆိုရင်ကော ကားက without ဖြစ်မှာလား။ နံပါတ်ကျပြီး နာမည်ပြောင်းပြီးသား ကားရောဆောင်ရမှာလား။ တချို့က ဆောင်ရမယ်။ တချို့က မဆောင်ရဘူးပြောတယ်။ ဆောင်ရင်ကော ဘယ်မှာဆောင်ရမှာလည်း ။ ဒီကိစ္စတွေကို တိတိကျကျ ဘယ် ဖုံး ဘယ်ဂျီမေးမှာ မေးလို့ရလဲ။ နံပါတ်ကျပြီးသားရော ယာယီနံပါတ်ရော ဆောင်ရမှာလား ဘယ်မှာဆောင်ရမလဲ ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲ သိသူတွေ တိတိကျကျလေး တင်ပေးကြပါဦး။